Kenya oo dib uga noqotay haddana mar kale go'aan ay dooneeysay inay ku xirto xerada qaxootiga ugu weyn dunida ee Dhadhaab.. - iftineducation.com
Kenya oo dib uga noqotay haddana mar kale go’aan ay dooneeysay inay ku xirto xerada qaxootiga ugu weyn dunida ee Dhadhaab..
aadan21 / August 27, 2016
iftineducation.com – Kenya ayaa dib uga noqday haddana mar kale go’aan ay dooneeysay inay ku xirto xerada qaxootiga ugu weyn dunida ee Dhadhaab, . Wasiirka Arrimaha Gudaha Joseph Nkaissery ayaa ku dhawaaqay go’aanka xukuumadda oo sheegay in habka celinta aan la fulin karin ilaa ay xasilooni ka jirto Soomaaliya.
dawlada Kenya ayaa sheegay dabayaaqadii May in ay xiri doonto xerada qaxootiga bisha November, iyagoo xiganaya walaac dhinaca amniga ah iyo culayska dhaqaale. Waxa sido kale oo ay kala direen waaxda Arrimaha Qaxootiga, hay’ada dawladeed ayaa loo xilsaaray la socodka xerada Dhadhaab.
Xerada ayaa hoy u tahay 338.000 oo qaxooti ah oo 13 dal oo kala duwan, inta badan dadkaasi ay yihiin Somali.
Go’aanka Xukuumadda Kenya ayaa ku soo beegantay iyadoo booqasho laba maalmood ah xoghayaha Maraykanka ee gobolka John Kerry uu Nairobi toddobaadkan ku tagay .
Kerry ayaa wadahadalo la galay dawladda Kenya oo ku saabsan xaaladda ka jirta Soomaaliya, ka sokow dhibaatada ka sii dareysa ee South Sudan. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in Ciidamada dalkiisa eey kaso baxayaan Soomaaliya sanada 2018.
Intii uu booqashada, Kerry ku joogay dalka ayuu ku dhawaaqay go’aanka dowladda Mareykanka ee ugu deeqqeso in ka badan $ 146 milyan oo gargaar bani’aadamnimo si ay u taageeraan dhibanayaasha abaaraha ee Kenya iyo Soomaaliya. Qaar ka mid ah maalgelinta ayaa loogu deeqi doonaa Hay’adda Qaramada Midoobay ee Qaxootiga si ay u taageeraan qaxootiga iyo hirgelinta habka celinta tabaruca ah.
Hay’adda UN ayaa bishii July codsatay $ 115.4 million maalgelin si ay u taageeraan barnaamijka dib u celinta.
Xukuumadda Kenya ayaa ku hanjabay in ay xireso xeeryaha qaxootiga Dhadhaab marar badan ee la soo dhaafay, iyagoo ugu wacaya xerada “dhulka argagixisada..
Tan iyo markii barnaamijka celinta tabaruca uu bilaabmay bishii December 2014, in ka badan 22,000 oo qaxooti Soomaali ah ayaa dib ugu laabtay Soomaaliya. Tani ma joojin qulqulka qaxootiga soo galay dalka kenya , 8,500 oo qaxooti dheeraad ayaa kasoo galay Konfurta Sudan dagaallada dhawaan socda halka.
Maxkamadda ugu sarraysa maamulka France oo daaqada ka tuuray mamnuucida muranka dhalisay ee labiska jirka buuxa ee dabaasha ama “burkini..
Shir madaxeedka Afrika iyo Japan: 30 bilyan oo loogu deeqay Afrika: SAWIRRO